Mba Ho Hita Sy Haharitra Ny Kolontsaina Sy Fiteny Nomatsigenga Ao Pero · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Aogositra 2015 4:58 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Català, Deutsch, Español, Français, русский, Ελληνικά, Español
Mpikambana amin'ny vondrom-piarahamonina Nomatsigenga. Sary natolotr'ilay tetikasa.
Ny Nomatsigenga, tononina hoe [nomatsi'geŋa], dia vahoaka miaina anatinà vondrom-piarahamonina teratany miisa 33 ao amin'ny Lohasahan'i Pangoa, ao afovoan'ny Amazonia Peroviana, ary tandindonin-doza ny fiteniny.
Ho an'i Alexandra Aikhenvald, mpahay momba ny teny, manokan-tena mandinika ireo fiteny ao Amazonia, tafiditra ao anatin'ny zana-tsampan'ny fitenim-poko Kampa, izay sampana iray ao anatin'ny Arawak ihany koa ny fitenin-dry zareo Nomatsigenga ireo.
Manjavona miaraka amin'ny fotoana koa ny fototra samihafan'ny fahalalàna nentin-drazan'ny Nomatsigenga. Hisorohana an'izany, natsangana ny Tahiry ho an'ny Fiteny sy Kolontsaina Nomatsigenga, araka izay hazavaina ao amin'ilay tranonkala Nomatsigenga:
[…] ny tahiry dizitaly voalohany indrindra dia noforonina niaraka tamin'ny tanjona handrakitra sy hanao izay hahitàna sy hampaharitra ny fiteny ary ny kolontsain'ny vahoakanay. Fandraisana andraikitra vokatry ny fiaraha-mientan'ny vahoaka Nomatsigenga, ny tetikasa Firaketana ny Fiteny Nomatsigenga (DLN); ny fikambanana KANUJA, ny fikambanana “Firebird Foundation” ary ny Ministeran'ny Kolontsaina.
Niresaka tamin'i Gerardo Manuel García, talen'ilay tetikasa, momba io hetsika io ny Global Voices.
Global Voices (GV): Ahoana no nipoiran'ny hevitra hanangana ny tahiry dizitaly ary inona ireo dingana nodiavina mba hahatanteraka azy?
Gerardo Manuel Garcia (GMG): Rehefa nanao fanadihadiana teny an-kianja ireo manampahaizana ary nanàmbatra ny vokatra, dia nandrakitra ny torohay ho amin'ny fitenin'ny indizena. Ny tsara indrindra, any aminà toerana tantànan'ny andrim-panjakana any ivelany no asiana ilay tahiry, toy ny Tahirin'ireo Fiteny Indizena ao Amerika Latina any amin'ny Anjerimanontolon'i Texas na ny Tahiry Dobes. Ny tsinin'ity rafitra ity dia tsy afaka mandre ireo feo, mahita ireo lahatsary sy sary nalain'ilay mpikaroka akory ilay vondrom-piarahamonina miteny ilay fiteny. Ny eritreritray dia ny hanolotra tahiry dizitaly maimaimpoana, amin'izay ireo mpiteny mba mety handray azy ity ho toy ny azy sy ho afaka hanavao ny torohay momba ny vondrom-piarahamonina misy azy sy ilay fiteny mba hanaraka ny zava-misy. Tany am-piandohan'ny 2015 no noforonina ny Tahiry Dizitaly ho an'ny Fiteny sy Kolontsaina Nomatsigenga.
GV: Inona no azonao ambara aminay momba ny fiteny Nomatsigenga ?
GMG: Ho an'ny UNESCO dia tandindonin-doza ny fiteny Nomatsigenga; 8000 monja no miteny azy ao amin'ny faritra afovoan'ny Amazona Peroviana, distrikan'i San Martín de Pangoa, faritanin'i Satipo, faritra Junín. Izany no antony nanapahanay hevitra handrakitra ity fiteny ity sy ny lovan-tsofiny amin'ny fanambàrana ireo angano sy arira, ny hira, ny kabary, ary ireo tantaran'ny olona mba hananganana tahiry dizitaly iray hitahirizana ireo torohay, miainga avy amin'ny lovan-tsofina ary mitety ny zavatra rehetra hatrany amin'ny resaka fitsaboana nentim-paharazana. Ny Tahiry Dizitaly ho an'ny Fiteny sy Kolontsaina Nomatsigenga dia vokatry ny asa niaraka nataon'ny Tetikasa Firaketana ny Fiteny Nomatsigenga, ireo vondrom-piarahamonina teratany, ny fikambanana indizena KANUJA, ny Ministeran'ny Kolontsaina, ny fari-piadidiana'ny distrikan'i San Martín de Pangoa ary ny fanohanana ara-bola avy amin'ny fikambanana Firebird Foundation.
GV: Inona no anjara andraikitry ny tanora Nomatsigenga ao anatin'ilay tetikasa?
GMG: Tanora no ankamaroan'ireo miteny ny fiteny Amazona, ary tsy afaka amin'izany ny fiteny Nomatsigenga. Ao amin'ny Tetikasa Firaketana ny Fiteny Nomatsigenga, ny tanora toa an'i María Manay Chimanga sy Magadalena Chimanga Chanqueti no tena mirotsaka mivantana. Avy amin'ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'ny fanambàrany ireo torohay nentim-paharazana momba ny vondrom-piarahamonina misy azy no nahatsapàny tena koa ho ‘voatambatra sy niarina’, satria “rehefa maty ireo lehilahy feno fahendrena dia maty miaraka amin'izy ireny koa ireo fiteny sy torohay rehetra.” Noho izay no nahatonga an-dry Guisenia y Herlinda Rodríguez mirahavavy avy ao amin'ny vondrom-piarahamonina Mazaronquiari handray anjara amin'ilay fifanakalozan-dresaka sy fanolorana hevitra. Tena zava-dehibe ny fandraisana anjara mavitriky ny tanora. Handrisika bebe kokoa ny tanora izany mba handrakitra ny fiteniny sy ny kolontsainy.
GV: Inona no tena asa ara-tokerana ataon'izy ireo?
GMG: Mpamboly no ankamaroan'ireo Nomatsigengas ary mivarotra cacao sy katsaka.
GV: Momba ilay fanadihadiana — aiza ho aiza izao ny asa izao ary ahoana no ahafahanay mijery azy io?
GMG: Am-periny mihitsy izao ny fanatontosana ny Tahiry Fanadihadiana ny Nomatsigenga ary nitarina [ny fe-potoana famokarana]. Arakaraky ny hitsidihanao vondrom-piarahamonina Nomatsigenga isankarazany ao Pangoa — eo amin'ny 36 ny fitambaran'ire vondrom-piarahamonina — no ahitànao fahasamihafàna bebe kokoa amin'ny fomba fiteny sy ny kolontsaina eo amin'ireo vondrom-piarahamonina ireo. Izany no antony maha-mbola amperiny foana ny asa fanadihadianay. Na mbola ao anatin'ny dingana famokarana hatrany aza ilay izy, efa misy sasantsasany amin'ireo rakipeo [azo raisina sahady], toy ny asehon'ilay lahatsary vao haingana noraketinay momba ny fihaonamben'ireo Vondrom-piarahamonina Nomatsigenga sy Ashaninka.
GV: Misaotra betsaka anao, ry Gerardo.
Ireto ambany ireto ny fehezantany sasany amin'ny fiteny Nomatsigenga :